Sina Mpanentana clitoris miolakolaka miandalana miaraka amina orinasa mpamokatra ZK005 mitsentsitra sy mangovitra | ANDREFANA
Famporisihana klitoris miolakolaka tsy miova miaraka amin'ny ZK005 mitsentsitra sy mangovitra
Size: 200 × 45 × 61mm
Function: 10-mode vibration ary 7-mode mitroka
• Fanandramana ara-nofo vaovao avy amin'ny stimulator mitsentsitra ny andian-dahatsoratra Clayderman.
• Ny pulse vibration dia miteraka fikorianan'ny rivotra hitsentsitra sy hanihany ireo klitoris, manampy anao hahatratra orgasme ao anatin'ny fotoana fohy.
• 10-mode vibration sy modely minono 7-mode hanomezana fahafaham-po tanteraka ireo takiana fanorana isan-karazany toy ny nipple, clitoris, tendany, lamosina, tongotra sy tongotra misy feo malefaka.
• Vita amin'ny silikonin'ny sakafo, tsy misy fofona, malefaka hikasika ny tena hoditra olona.
• Famolavolana lalina sy tsy misy rano ary mangina, mety amin'ny trano fidiovana, dobo filomanosana, na aiza na aiza ao an-trano.
• Ny vokatra dia mivelatra amin'ny faharanitan-tsaina, hatsaran-tarehy ary fifandraisana, mendrika izany ianao.
Teo aloha: Stimulator clitoris rechargeable maoderina ZK003C
Manaraka: New Clayderman clitoris stimulator ZK010
Vibrator G-spot mahazatra, endrika tsotra miaraka amin'ny ...
20-hafainganam-pandehan'ny vatan'ny silika azo ovaina REHAY7A RE007A
Vibrator miaraka amin'ny silipo malefaka mahery sy fiainana ...
Vibrator miaraka amin'ny fanamainana VV171A
Stimulator clitoris rechargeable maoderina ZK003C